काठमाण्डौ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी शाखा तथा सेवा बिस्तारमा ध्यान दिंदा व्यवस्थापन पढेका बेरोजगार युवा जनशक्तिले समेत जागिरको उस्तै अवसर पाउन थालेका छन् । यही क्रममा सिद्धार्थ बैंक र पोखरा फाइनान्सले समेत जागिरको लागि अवसर खुलाएका छन् । सिद्धार्थ बैंक लिमीटेडले निकट भविष्यमा बिस्तार...
नाफामा क्षय व्यहोरेको पोखरा फाइनान्सको रिजर्बमा कमालको प्रगति !
काठमाण्डौ । चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्सको खूद नाफा पनि घटेको छ । यो अवधिमा पोखरा फाइनान्सले १ करोड ४८ लाख नाफा कमायो, जब कि अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको नाफा १ करोड ६४ लाख थियो । यो फाइनान्सले समीक्षा अवधिमा बढेको पूँजी अनुसार व्यवसाय बिस्तार गर्न सकेन । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३ करोड ९९ लाख रहेको...
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्सले निश्कासन गरेको एफपीओको बाँडफाँड बिहीबार(भदौ २९ गते) हुने भएको छ । पोखरा फाइनान्सको एफपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको एनआइबिएल क्यापिटलका अनुसार बिहीबार बिहान १०ः३० बजेबाट पोखरा फाइनान्सको एफपीओको बाँडफाँडको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । धराप कम्पनीको रुपमा रहेको पोखरा फाइनान्सले साउन...
लगानीकर्ता किन यति मूर्ख ? पैसा सस्तो कि डूब्ने हतारो ?
काठमाण्डौ । नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरु कागले कान लग्यो भन्ने कसैले हल्ला फैलाए भने आफ्नो कान नछामी कागको पछि कुद्ने गर्छन् । विज्ञ तथा जानकार, यस्तै विभिन्न संचारमाध्यमहरुले पटक–पटक सचेत गराउँदा समेत बजारका कच्चा लगानीकर्तामा यो प्रवृति अझै हटेको छैन । उदाहरणको रुपमा पोखरा फाइनान्सले आह्वान गरेको एफपीओमा परेको आवेदनलाई लिन सकिन्छ ।...
पोखरा फाइनान्सको एफपीओमा आवेदन खुल्यो, लगानी गर्ने या नगर्ने ?
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडले आज(साउन २९)देखि २१ करोड ६४ लाख मूल्यको ९ लाख ८३ हजार ६ सय ८२ कित्ता एफपीओ निश्कासन गरेको छ । पछिल्लो बजार मूल्य प्रतिकित्ता २ सय ५२ रुपैयाँ रहेको यो फाइनान्सको एफपीओ एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २ सय २० रुपैयाँको दरले निश्कासन गरिएको हो । एफपीओमा आगामी भदौ...
पोखरा फाइनान्सको झूर प्रदर्शन, उच्च लागत खर्चले नाफामा धक्का !
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । यो फाइनान्सको खूद नाफामा २ लाख मात्र वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ८ करोड ७५ लाख खूद नाफा कमाएको यो फाइनान्सले ०७३/७४ मा भने ८ करोड ७७ लाख मात्र नाफा आर्जन गरेको हो । बित्तीय रुपमा निकै कमजोर रहेको यो फाइनान्सले १४ करोड ६९ लाख रहेको खूद ब्याज...
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडले आगामी साउन २९ गतेदेखि साधारण सेयरको अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ) गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ सय २० रुपैयाँ प्रिमियम थपी प्रति कित्ता २२० रुपैयाँको दरले एफपीओ निश्कासन हुन लागेको हो । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडले बुधबार एफपीओ सम्बन्धी एक आह्वानपत्र प्रकाशित गर्दै २९...
पोखरा फाइनान्सको एफपीओमा डूब्ने खतरा !
काठमाण्डौ । देशको एक मात्र क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले पोखरा फाइनान्स लिमीटेडको एफपीओलाई ‘आइपीओ ग्रेड फोर’को रेटिङ प्रदान गरेको छ । यो रेटिङले पोखरा फाइनान्स आधारभूत रुपमा कमजोर कम्पनी रहेको इंगित गर्छ । यसर्थ, यस्ता कम्पनीको एफपीओमा लगानी गरे डूूब्न सकिन्छ । पोखरा फाइनान्सलाई धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूूल्यसहित...
आउने भो पोखरा फाइनान्सको एफपीओ, प्रतिकित्ता मूल्य २२० रुपैयाँ
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले पोखरा फाइनान्स लिमीटेडलाई एफपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिएको छ । यो फाइनान्सलाई १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १२० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता २२० रुपैयाँको दरले कुल ९ लाख ८३ हजार ६ सय ८२ कित्ता एफपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिएको हो । एफपीओको निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबिएल क्यापिटल...
काठमाण्डौ । सार्वजनिक निश्कासनहरुको बाढीमा पोखरा फाइनान्सको एफपीओ प्रस्ताव पनि थपिएको छ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेड पनि ९ लाख ८३ हजार कित्ता एफपीओ निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्ड पुुगेको हो । पोखरा फाइनान्सले एफपीओ निश्कासनको माग गर्दै फागनु २६ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको हो । आवेदन स्वीकार गर्दै बोर्डले उसको प्रस्तावलाई...
पहिलो त्रैमासमा पोखरा फाइनान्सको कमालको प्रगति
काठमाण्डौ । पोखरा फाइनान्स लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कमालको प्रगति हासिल गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खूद नाफातर्फ यो फाइनान्सले ११९.५५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको हो । फाइनान्सले मंगलबार जारी गरेको बित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आबको पहिलो त्रैमासमा ७५ लाख ३ हजार रुपैयाँ खूद नाफा...